I-Silicone yoLimo oluSasazekayo lwezoLimo eSasaza iAntaka ye-SILIA2008 yeFektri kunye nePricelist | I-Honneur
I-Silicone yoLimo yokuSasaza iArhente yezoLimo i-SILIA2008
I-SILIA-2008 ye-Silicone yokuSasaza kweLimo kunye ne-Wetting Agent
Inkangeleko: Imibala engenalo ulwelo ukukhanya kwe-amber
Ukubonisa into （25 ℃ ， mm2 / s）: 25-50
Ukudibana okungaphezulu （25 ℃, 0,0%, mN / m）: <20.5
Ubukhulu （25 ℃）: 1.01 ～ 1.03g / cm3
Ipeyinti yelifu （1% wt, ℃） ： <10 ℃
SILIA-2008 Ukulima i-Silicone yokuSasaza kunye neArhente yokuKhanya
yi-polyether trisiloxane eguquliweyo kunye nohlobo lwe-silicone surapyant enamandla amakhulu okusasaza nokungena. Yenza ukuba uxinzelelo lomphezulu wamanzi lube sezantsi uye kuma-20.5mN / m kwi-0.1% (wt.). Emva komxube kunye nesisombululo sokubulala izitshabalalisi kwisilinganiselo esithile, inokuthoba ingelosi yokudibana phakathi kwesitshizi kunye namagqabi, enokuthi yandise isigqubuthelo sokutshiza. I-SILIA-2008 inokwenza ukuba iyeza lokubulala izitshabalalisi
Ngokutyatyamba kwamagqabi, asebenza kakhulu ekuphuculeni ukusebenza kwawo, ukunciphisa inani lezibulala-zinambuzane, ukonga indleko, ukunciphisa ungcoliseko lwendalo olubangelwa zizitshabalalisi zezitshabalalisi
Spreading Iarhente yokusasazeka enamandla kunye nokungena
 Ukunciphisa umthamo we-arhente yokutshiza yesifo
Ukukhuthaza ukufunxwa okukhawulezayo kwezolimo (ukubekezela kuneemvula)
1. inokusetyenziswa njengesixhobo sokutshiza: I-SILIA-2008 ingonyusa isigubungelo se-arhente yokutshiza, kunye nokukhuthaza ukuthathwa kunye nokunciphisa umthamo wommeli wokutshiza. I-SILIA-2008 yeyona isebenzayo xa umxube wokutshiza ukho
(i) ngaphakathi kuluhlu lwe-PH lwe-6-8,
(ii) alungiselele umxube wokutshiza ukuze usetyenziswe ngokukhawuleza okanye ungaphakathi kwi-24h.
2. Ingasetyenziswa kwifomathi yezolimo: I-SILIA-2008 inokongezwa kwi-pesticide yoqobo.
1) Ukusetyenziswa kwesitshizi esixutywe kwidrum
Ngokubanzi, yongeza i-SILIA-2008 (amaxesha angama-4000) ama-5g kwitshiza nganye engama-20kg. Ukuba ifuna ukukhuthaza i-adsorption yenkqubo yokubulala izitshabalalisi, yonyusa umsebenzi wokubulala izitshabalalisi okanye ukunciphisa inani lokutshiza ngaphezulu, kuya kufuneka yongeze inani lokusetyenziswa ngokufanelekileyo. Ngokubanzi, imali yile ilandelayo:
Isityalo esikhuthaza ukulawulwa: 0,025% ～ 0.05%
Indlela yokubulala izitshabalalisi: 0.025% ～ 0.1%
Intsholongwane: 0.015% ～ 0.05%
Isichumisi nesixhobo sokulandela umkhondo: 0.015 ～ 0.1%
Xa usebenzisa, qala ngokunyibilikisa isibulala-zinambuzane, yongeza i-SILIA-2008 emva komxube ofanayo wamanzi angama-80, emva koko wongeza amanzi kwi-100% uze uwaxube ngokwahlukeneyo. Kucetyiswa ukuba xa usebenzisa i-Agricola Silicone Ukusasaza kunye nokufikelela kwiArhente yokuHamba, isixa samanzi sehlisiwe saya kwi-1/2 yesiqhelo (kucetyiswa) okanye 2/3, ukusetyenziswa okuqhelekileyo kwesibulala-zinambuzane kuncitshisiwe ukuya kuma-70-80% eqhelekileyo. Usebenzisa iapezu encinci yeaperture iya kukhawulezisa isantya sokutshiza.
2) Ukusetyenziswa kwePilisi yeTyhefu
Xa imveliso yongezwa kwi-pesticide yentsusa, sicebisa ukuba isixa eso yi-0.5% -8% yeyeza lokubulala izitshabalalisi. Uhlengahlengiso lwexabiso le-PH lokukhutshwa kwesibulala-zinambuzane ku-6-8. Umsebenzisi kufuneka alungelelanise inani le-Silicone yokuSasazwa kweZolimo kunye nokuNgena kwiAjorali yeentlobo ezahlukeneyo zezibulala-zinambuzane kunye nokufumana imveliso ukufikelela kwisiphumo esisebenzayo nesoqoqosho kakhulu. Yenza iimvavanyo zokuhambelana kunye novavanyo lwenqanaba ngaphambi kokusetyenziswa ..
Edlulileyo: I-Silicone yoLimo yokuSasaza iArhente yezoLimo i-SILIA-2001
Okulandelayo: I-Silicone yoLimo yokuSasaza iArhente yezoLimo i-SILIA2009
Ukulima i-Silicone yokuSasaza kunye neArhente yokuKhanya
Ummeli we-anti-phenolic yellowing (BHT)